Google doziri nsogbu nche ọhụrụ na sọftụwia ya Akụkọ akụrụngwa
Google na-edozi nsogbu nchekwa ọhụụ na ngwanrọ ya
N'ịbụ onye gam akporo onye ọrụ na-adịbeghị anya izu e nnọọ mgbagwoju tumadi ruru ka nnukwu nsogbu na ngwaọrụ niile atawo ahụhụ, nke a bụ ikpe na, dị ka akụkọ kachasị ọhụrụ e bipụtara na ibe nchekwa pụrụ iche, ọtụtụ nde ngwaọrụ nwere ike ibute ọrịa. Google kwuputara na mwepụta nke dị iche iche patch nke na-edozi nsogbu ndị a niile, n'etiti ha QuadRooter, ikekwe nke kachasị dị egwu.
Ekwesiri ighota na nzaghachi nke ndi injinia Google abughi ihe di elu, na-enye ngwanro ha otutu oganihu kpochapu nsogbu ndia ha mezie ọbụna nsogbu ndị pụrụ ịkpata. N'ime nsogbu ndị a chọpụtara, mmadụ kwesịrị igosipụta nke ọ ga-ekwe omume ikpuchi maleare n'ime onyonyo JPEG gbanwere. N'ihi nke a onye ọrụ nwere ike ịbanye ekwentị ọ bụla naanị site n'ime ka onye nwe ya pịa ihe oyiyi ahụ agbakwunye na email.
Google na-achịkwa iji dozie nsogbu nchekwa niile achọpụtara na gam akporo
Ọzọ nke ọma achọpụtara na gbazie nwere metụtara malware KpọọJam y DressCode, ma na ọnụnọ Google Play na izu ndị na-adịbeghị anya. N'otu aka, CallJam bụ malware nke mere oku na ọnụ ọgụgụ adịchaghị na-enweghị ikike anyị mgbe DressCode nwere ike ịnwe ikikere nke ndị nchịkwa yana ọbụna na-emerụ netwọkụ mpaghara anyị.
N'ikpeazụ, m ga-achọ ịkọrọ gị QuadRooter, malware dị ize ndụ nke jisiri ike itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ijeri ngwaọrụ gam akporo na izu ole na ole gara aga. Mgbe mmelite ikpeazụ a mechara, ọdụm ndị a niile dị ka ọ dị n'ihe egwu.
Ozi ndi ozo: Engadget
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Google na-edozi nsogbu nchekwa ọhụụ na ngwanrọ ya
Spotify ruru nde ndị na-akwụ ụgwọ nde 40
Microsoft nwere ike ịkagbu ọdịnihu Microsoft Band 3